Amanqaku aphuma kwiVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi | Ukushiya i-India kwi-eVisa India
I-eVisa India Amazibuko okuPhuma
Unokuza eIndiya ngeendlela ezi-4 zokuhamba: ngenqwelo-moya, ngololiwe, ngebhasi okanye ngololiwe. Ngelixa zimbini kuphela iindlela zokungena ezifanelekileyo, ngenqwelomoya nangeenqanawa zokuhamba ngenqanawa, ungaphuma ngayo nayiphi na indlela ye2 yokuhamba kodwa kuphela kumazibuko amiselweyo okuphuma.
Ngokomthetho kaRhulumente wase-Indiya we-eVisa India okanye i-Visa yaseIndiya ye-Elektroniki, ngezantsi kweendlela ezi-4 zothutho ngoku ezivunyelweyo ukushiya i-India kwi-eVisa India, ukuba ufake isicelo se-India eTourist Visa okanye i-India eBusiness Visa okanye i-India eMedical Visa. Ungaphuma eIndiya ngenye yezi zinto zilandelayo zichazwe ngezantsi isikhululo okanye izibuko.
Ukuba une-Visa yokufaka emininzi ke uyavunyelwa ukuba uphume ngeenqwelomoya okanye kwizikhululo zeenqwelomoya. Akunyanzelekanga ukuba uhambe ngenqanawa enye yokungena kutyelelo olulandelayo.
Uluhlu lwezikhululo zeenqwelo moya kunye nezitishi ziya kuhlaziywa rhoqo emva kweenyanga ezimbalwa, ke qhubeka ujonge olu luhlu kule webhusayithi kwaye ubeke uphawu kuyo.
Olu luhlu luza kuhlaziywa kwaye uninzi lwezikhululo zeenqwelo moya kunye nezikhululo zamachweba ziya kongezwa kwiinyanga ezizayo njengesigqibo sikaRhulumente wase-India.
Uvumelekile ukungena eIndiya kwiVisa ye-elektroniki yaseIndiya (eVisa India) ngeendlela ezimbini kuphela zothutho, uMoya noLwandle. Nangona kunjalo, ungashiya / uphume eIndiya kwiVisa ye-elektroniki yaseIndiya (i-eVisa India) ngeendlela ezine zothutho, uMoya (iPlani), uLwandle, uLoliwe kunye neBhasi. Ezi ndawo zilandelayo zichongiweyo zokufudukela kwelinye ilizwe (ii-ICPs) zivunyelwe ukuphuma eIndiya. (Izikhululo zeenqwelo moya ezingama-34, iiNqaku lokuKhangela ukuFudukela eMhlabeni, iiChweba ezingama-31, iiNdawo ezi-5 zoLoliwe)
I-Agati kunye neMinicoy Island Lakshdwip UT
Iposi yeMunabao yoLoliwe yokuKhangela
Iposi yokujonga izinto ePhambuka
Isikhululo sikaloliwe i-Gede kunye nokuThunyelwa kweNdlela ePosini
Iposi yokuKhangela kuHaridaspur
I-Chitpur Rail Checkpost
Cofa apha ukuze ubone uluhlu olupheleleyo lweSikhululo seenqwelomoya kunye neSeaport ezivunyelwe ukungena kwi-eVisa India (eIndiya yeVisa ye-elektroniki).